Archive du 20191118
Fifidianana eto Iarivo Miketrika mafy ny karana …
Kihon-dalana farany ho an’ny fampielezan-kevitry ny fifidianana ben’ny tanàna ity herinandro ity. Amin’ny heriny anio dia ny alatsinainy 25 novambra no hikatona tanteraka izany.
Constant Raveloson « Mbola manjaka ny kiantranoantrano eto e ! »
Nitondra ny heviny mahakasika ny fiainam-pirenena ny mpanao politika, Constant Raveloson.
Fitakiana ireo Nosy Malagasy Tsy mora fa tsy maintsy atao
Nivoaka tamin’ny fahanginany ny sabotsy teo ny antoko politika Otrikafo manoloana ny fisian’ny fihaonana eo amin’ireo
Imbiki Herilaza « Ho avy ny fihantsiana sy ady an-kolaka”
Anio ny fihaonana voalohany eo amin'ny an-daniny Malagasy sy ny an-kilany Frantsay handinihana ny famerenana ny Nosy Malagasy ao amin'ny ranomasimbe indiana.
Fitakiana ny “Iles Eparses” Ho fandresena tahaka ny an’ny Barea ve ?
Nanentana ny fitondram-panjakana fa tokony hanangana ny sainam-pirenena fotsy, mena, maitso ny Malagasy rehetra anio alatsinainy 18
Tetibolam-panjakana 2020 Homena 110 miliara ariary ireo governora…
Hanokanan’ny fanjakana vola 5 miliara ariary isanisany ireo governora mitantana ny faritra araka ny voasoratra ao amin’ny volavolan-dalàna momba ny tetibola 2020.